Duco – Page 2 – Akhbaarta Wanaagsan
Duco / Kitaabka Quduuska Ah / Psalms
1 Waxaa barakaysan ninkii aan ku socon talada kuwa sharka leh, Oo aan istaagin jidka dembilayaasha, Oo aan ku fadhiisan kursiga kuwa wax quudhsada. 2 Laakiinse waxaa isaga ka farxiya sharciga Rabbiga, …
All resources / Duco / Kitaabka Quduuska Ah / Qoraal
Oo wuxuu yidhi, “Rabbiyow Ilaahii awowayaashayow, sow ma ahid Ilaaha samada ku jira? Oo sow ma ahid kan u taliya kulli boqortooyooyinka quruumaha oo dhan? Oo gacantaadana waxaa ku jira …
All resources / Duco / Kitaabka Quduuska Ah / Maqal / Qoraal
Rabbigu waa adhijirka i jira!
SABUURRADII 23 1Rabbigu waa adhijirka i jira; waxba u baahan maayo. 2Wuxuu i fadhiisiyaa doog qoyan dhexdiis, Oo wuxuu ii hoggaamiyaa biyaha deggan dhinacooda. 3Naftayda wuu soo celiyaa. Oo …
Rabbiga gabay cusub ugu gabya!
SABUURRADII 96 Rabbiga gabay cusub ugu gabya, Dadka dhulka oo dhammow, Rabbiga u gabya. Rabbiga u gabya, oo magiciisa ammaana, Oo badbaadintiisana muujiya maalin ka maalin. Ammaantiisa quruumaha dhexdooda …
All resources / Duco
Weligayba indhahaygu waxay u jeedaan xagga Rabbiga, Waayo, wuxuu cagahayga ka bixin doonaa dabinka.
SABUURRADII 25 1Rabbiyow, naftayda xaggaagaan kor ugu qaadaa. 2Ilaahayow, adigaan isku kaa halleeyey, Haddaba yaanan ceeboobin, Oo yaan cadaawayaashaydu ii faanin. 3Kuwa adiga ku suga midkoodna ceeboobi maayo, Laakiinse waxaa ceeboobi doona …
All resources / Axdiga hore / Duco / Lectures / Maqal / Psalms / Qiso gaaban / Qoraal / Waxbaritaanka
SABUURKA 121 OO MAQAL IYO AKHRIS AH !!
CUTUB 121 1 Buurahaan indhahayga ku taagi doonaa, Caawimaaddaydu xaggee bay ka iman doontaa? 2 Caawimaaddaydu waxay ka timaadaa Rabbiga sameeyey samada iyo dhulka. 3 Isagu uma oggolaan doono in …
All resources / Duco / Muuqaal
Ducada Nabadda Filanka